သခင့်စကား ၀ိညာဉ်ရေးရာစာစောင် အမှတ်၁၃၂၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၂ - မင်းအောင်သက်လွင်
သခင့်စကား ၀ိညာဉ်ရေးရာစာစောင် အမှတ်၁၃၂၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၂
Click Here to Download LW132
လိုချင်သောဆု (Thian Hnem Par) သဲမြတ်မွန်
ဘဝရဲ့ အလင်းရှင် ယော ၁၄း ၆။ (က.န.ခ) နန်းရထိုက်
Read more: သခင့်စကား ၀ိညာဉ်ရေးရာစာစောင် အမှတ်၁၃၂၊ သြဂုတ်လ၊...
တရုပ်ပြည်မှာ မွေးဖွား၊ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့ဇနီးသည်က သူမငယ်ငယ်တုံးက ကျားရဲသတ္တ၀ါများ တောတောင်တွေမှာ နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက် မြက်ရိတ်တံဇင်နဲ့ မြက်ရိတ်ရင်း ကလေးငယ်လေးကို ကျောပိုးထားတယ်။ နောက်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကတော့ သူမဘေးကလမ်းလျှောက်နေတယ်။
Read more: ဘီလီဂရေဟမ်ရဲ့ တရုပ်ပြည်မစ်ရှစ်ခရီး...
ရွာတစ်ရွာ မှာ အဖိုးအို တစ်ဦး ရှိတယ်။ ဆင်းဆင်း ရဲရဲ ပဲ-
Read more: အဖိုးအို၊ မြင်းတစ်ကောင်နှင့် ဝေဖန်စကားများ
ဒီနေ့အလုပ်ကနေပြန်လာတော့ လူက ရေလည်ပင်ပန်းနေတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှူ့တွေကြောင့်လည်း နေမှာပေါ့။ ပြောရရင်တော့ ကျောင်းရယ် အလုပ်ရယ် ရည်းစားရယ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရယ်ကို ညီမျှအောင်ခွဲရင်း ခေါင်းမူးသွားတာလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ အလုပ်ကပေးတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှူ့။ မနက်ကနေ ညနေထိ လိမော်ရည်တစ်ခွက်သောက်ပြီး ဘယ်လိုနေလည်း
Read more: ကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့အပြင်းစားမိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်း
A Letter toalong-lost friend သူငယ်ချင်းထံသို့ပေးစာ
A Letter toalong-lost friend
Read more: A Letter toalong-lost friend...
သခင့်စကား the Lord's Word No.131 June2012 - မင်းအောင်သက်လွင်
အဖေဆိုတဲ့မြစ် - မင်းအောင်သက်လွင်၊ Bio - Click Here
ဘုရားပေးသောအဖေ - မလေး(တပ်ကြီးကုန်းအသင်းတော်၊မှော်ဘီ)
အနှိုင်းမဲ့ - Mary(ဖျာပုံ)
မိုး - ဆောင်းဦး
အမှတ်မထင် - ကောလင်းသူ
ကျောက်ခဲနှင့်စိန် - သဲမြတ်မွန်
ကိုယ်ရွှင်တော်နှင့်မယ်ပြုံးရွှင် - Lနန့်ကိုင်
စောင့်မျှော်နေပါတယ်သခင် - Angle(Kalay)
သခင့်သားသမီးဖြစ်ပါစေ - ယုံကြည်သူ(ကြယ်ကလေး)
မမေ့ပါနဲ့ - သဟေချီး(သမီးချော)
မိဘကျေးဇူး - အန်တီတစ်ဦး
အဖေဆိုတဲ့အဖေ - အထွေး(တောင်ကြီး)
အမှိုက်နဲ့ရေ - Jun Jay
ဖေဖေနှင့်ကျွန်တော် - ချစ်လင်းလေး
သက်သေခံချက် - မိုး
အဖေ့ဆုတောင်း - အယ်ဒီတာ
တဏှာနှင့်ပါဝါ ၉ - အရိုင်းပန်း
မျက်ရည်တစက် - မင်းအောင်သက်လွင်
Read more: သခင့်စကား the Lord's Word No.131 June2012 -...
ပေးလှုခြင်း (သို့) အလှုဒါနပြုခြင်း (သို့) စွန့်ကြဲခြင်း - နေ့စဉ်ခွန်အား ODB
အလှူခံဖလား The Offering Plate
ကျွန်မ၏ ယခင်သင်းအုပ်ဆရာ အက်ဒံဒေါ့ဆန်သည် အသင်းတော်သို့ ပေးလှူရန် တရားဟောပြောရသည်ကို မနှစ်သက်ကြောင်းပြောလေ့ရှိသည်။ သူ၏ယခင်အလုပ်က ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရသည့်အလုပ် ဖြစ်သောကြောင့် လူများကိုမလိုအပ်ဘဲ ဖိအားပေးရခြင်းကို သူမကြိုက်ပါ။ သို့သော် ကောရိ န္တုဩ၀ါဒစာဒုတိယစာစောင်ကို
Read more: ပေးလှုခြင်း (သို့) အလှုဒါနပြုခြင်း (သို့)...
ခြောက်သုံးလုံးအသင်းတော်များနှင့်အထွေထွေဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် - လောမဲ
666 Churches and Other Articles by Law Mae
1 666 church
2 Comparison of gospel
3. False Prophecy
4. Health Science and Bible
အဂ်နေးရှပ်(စ်) - နေမ၀င်ခဲ့သော မဟာလူသား
ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ အမည်နာမဟာ ပထမဦးဆုံး ရောမအင်ပါယာရဲ့ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ တော်ဖြစ်တဲ့ အန္တိအုတ်( Antioch) မြို့ မှာ ခေါ်တွင်ခဲ့တာပါ။ အမှန်ကတော့ ဘုရားမဲ့တွေက ပေးလိုက်တဲ့ နာမည်ပြောင်ပါ။ လက်တင်လိုတော့ Christiano လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ နောက်လိုက်များ (သို့ ) ခရစ်တော်ရဲ့ စစ်သည်များလို့ နားလည်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအမည်ပြောင်ဟာ ခသ ၄၀ မှာ တကယ့်အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝတဲ့အမည်နာမ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ရောမအာဏာပိုင်တွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ ဒီအမည် တံဆိပ်ကပ်ခံရသူကို သေမိန့် နဲ့ထိုက်တန်သူလို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ထာဝစဉ်တည်တံ့အောင် သွေးနဲ့ ထပ်ပြီး ကမ္ပည်း တင်ခဲ့သူကတော့ အန္တိအုတ်မြို့ အသင်းတော်ရဲ့ ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး အက်(ဂ်)နေးရှပ် (Ignatius) ဖြစ်ပါတယ်။
Read more: အဂ်နေးရှပ်(စ်) - နေမ၀င်ခဲ့သော မဟာလူသား
ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကပင် ရာသီဥတုသာယာသော ညအခါတွင် ကောင်းကင်ကြီးကို ငေးမော ကြည့်လေ့ရှိပါသည်။ ကောင်းကင်ပြင်တွင် လွန်စွာများပြားသော ၊ အရွယ်အစားနှင့် အရောင် တောက်ပမှုမတူညီသော ကြယ်များကို ရှာဖွေကြည့်ရှုရသည်မှာ စိတ်ငြိမ်သက်သာယာမှုကို လည်းကောင်း ၊ အေးချမ်းမှုကိုလည်းကောင်း ၊ ကြည်နူးမှုကိုလည်းကောင်း
Read more: ကြယ်ကလေးများမှတဆင့် အံ့သြဖွယ်ရာစတြာဝဠာ
သခင့်စကား အမှတ်(၁၃၀) Jun-2012 The Lord's Word
သိုးရိုင်းမှတ်တမ်း - မင်းအောင်သက်လွင်
သူရဲကောင်းမေမေ - နန်းရထိုက် (ကနခ)
အမေသို့ - Mary (ဖျာပုံ)
အမှတ်ရလျှက်ပါဖေဖေ - Thian Hnem Par
မေ့နေလျော့သလား - F.Penny(Mizo) တမူး
Read more: သခင့်စကား အမှတ်(၁၃၀) Jun-2012 The Lord's Word
နာခံတတ်ခြင်း This will give you chills
(မရှယ်လီသန်း ပေးပို့သည်ကို မြန်မာပြန်သည်)
လူငယ်တဦးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်သို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ သင်းအုပ်ဆရာ က ဘုရားသခင်ကို နာခံတတ်ရန် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ “ဘုရားသခင်ဟာ လူတွေကိုတိုက် ရိုက်စကားပြောသေးလား” ဟု စိတ်ထဲမှာသံသယဖြစ်နေပါသည်။
အစီစဉ်ပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် ကော်ဖီသောက် မုန့်စားရင်းနှင့် ပို့ချချက်များကို ဆွေးနွေးဖြစ်ပါသည်။ တဦး ခြင်းစီ၏ အသက်တာတွင်း ဘုရားသခင်မှနည်းမျိုးစုံဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့သည့်သက်သေခံချက်များကို အချင်းချင်း ဝေငှခဲ့ကြသည်။ ၁၀ နာရီခန့်မှာတော့ လူငယ်သည် အိမ်ကိုကားမောင်းပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကားမောင်းရင်း ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
“ အဖဘုရား လူသားတွေဆီကို စကားပြောသေးတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို စကားပြောပါ။ ကျွန်တော်နား ထောင်ပါ့မယ်၊ အကောင်းဆုံးနာခံတတ်ရန် ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ့မယ်”
ကားလမ်းမအတိုင်းမောင်းရင်း “ကားကိုရပ်ပြီး နို့တဂါလံဝယ်ရန် ထူးခြားတဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်”
လူငယ်သည်ခေါင်းကိုခါလျှက် အသံထွက်ပြီးပြောလိုက်မိပါသည်။ “ ဒါဘုရားသခင်ဆီကလား” သူဘာအဖြေမှမရပါ။ ထို့ကြောင့် ကားကိုဆက်မောင်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော်စိတ်ထဲကပေါ်လာပါသည်။ “နို့တဂါလံဝယ်ပါ”
လူငယ်သည် ဘုရားသခင်၏ခေါ်သံကိုမသိသဖြင့် ဧလိယဆီပြေးသွားသော ရှမွေလ အဖြစ်ကိုသတိရလိုက် ပါသည်။
“ ကောင်းပြီ၊ ဒါဘုရားသခင်ဆီကဆိုရင် ကျွန်တော်ဝယ်ပါ့မယ်” ဒါလေးကတော့ နာခံဖို့မခက်ပါဘူး။ ဒီနို့ကို သူပြန်သောက်လည်းရသဖြင့် ခက်ခဲသောစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ဟု သူနားလည်လိုက်ပါသည်။ သူနို့တဂါလံ ၀ယ်ပြီး အိမ်ကိုကားဆက်မောင်းလိုက်ပါသည်။ သူ ၇ လမ်းမြောက်ကို ဖြတ်နေစဉ် စိတ်ထဲမှတခု ခံစားလာ ပါသည်။
ဟာ.. ဒါမဟုတ်တာ ဟုဆိုလျက်လမ်းဆုံကိုကျော်လျက် ကားဆက်မောင်းလိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၇လမ်း ထဲကိုသွားရန်စိတ်ထဲမှ ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ နောက်လမ်းဆုံတခုတွင် သူပြန်လှည့်လာပြီး ၇လမ်း သို့ဆက်မောင်းလိုက်ပါသည်။ သူမသိမသာနောက်ပြောင်လျက် အသံထွက်ပြောလိုက်ပါသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား- ကျနော် လိုက်လုပ်ပါ့မယ်။”
သူအိမ်လုံးရေအနည်းငယ်ခန့်ကျော်မောင်းလျှက် ရပ်သင့်ကြောင်းစိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက်ခံစားရသဖြင့် ကားကို လမ်းဘေးသို့ထိုးရပ်လိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်ပါသည်။ သူရောက်နေသည့်နေရာမှာ အရောင်းအ၀ယ်စီးပွါးရေးသေစား ရပ်ကွက်ဖြစ်နေပြီး ဆိုင်များပိတ်လျက် အိမ်မီးများပိတ်လျက်ရှိနေသဖြင့် အားလုံးအိပ်ယာဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သူကောက်ချက်ချလိုက်ပါသည်။
စိတ်ထဲမှာ ထပ်မံခံစားလိုက်မိပါသည်။ ခံစားမိလိုက်သည်မှာ- “ ကားလမ်းတဖက်မှာရှိတဲ့အိမ်ကို နို့သွားပေး လိုက်ပါ။” လူငယ်သည် အိမ်ကိုကြည့်သော် မီးအားလုံးမှိတ်ထားသဖြင့် အိမ်ရှိလူများ အပြင်ထွက် သို့မဟုတ် အိပ်ကုန်ပြီဟု ထင်လျှက် သူ့ကားတခါးကိုဖွင့်ပြီး ကားထဲမှာ ထိုင်နေပါသည်။
“ အဖဘုရား- ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အိမ်ရှင်တွေအားလုံးအိပ်ကုန်ပြီ။ ကျွန်တော်ခေါ်နိုးလိုက်ရင် အိမ်ရှင်တွေ စိတ်ဆိုးကုန်ပြီး ကျွန်တော်အရူးဖြစ်လိမ့်မယ်”
သို့သော်လည်း အဲဒီအိမ်ကို နွားနို့သွားပို့ရန်စိတ်ထဲမှ ထပ်မံခံစားရပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူသည်ကား တခါးကိုဖွင့်လျှက် “ ကောင်းပါပြီ ဒါဘုရားသခင်ဆီကဆိုလျှင် အဲဒီအိမ်တခါးဝဆီသွားပြီး နို့သွားပို့လိုက် မယ်၊ အိမ်ရှင်လည်းစိတ်ဆိုး ကျွန်တော်လည်းအရူးဖြစ်ပေါ့ ဟုတ်ပြီလား၊ ကျွန်တော်က နာခံတတ်သူဖြစ်ခြင် တယ်လေ၊ ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတခုတော့ရှိရမယ်၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာကို အိမ်ရှင်က ချက်ခြင်း မဖြေရင် ကျွန်တော်ပြန်ပြီ။ ”
ကားလမ်းကိုဖြတ်လျှောက်ပြီး အိမ်၏ခေါင်းလောင်းကို နှိပ်လိုက်ပါသည်။ အထဲမှအသံကို ကြားလိုက်ပါ သည်။ လူတဦးမှ အော်ပြီးမေးလာပါသည်။ “ ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလိုခြင်လဲ” လူငယ်မထွက်သွားနိုင်ခင် တခါး ဖွင့်လာပါသည်။
အိမ်ရှင်အမျိုးသားသည် တီရှပ်အင်္ကျီဝတ်လျှက် အိပ်ယာထဲမှထလာသည့် ပုံဖြစ်နေပြီး မျက်နှာတွင် ကျေနပ် သည့်ပုံ မတွေ့ရပေ။
လူငယ်သည် နို့ကိုကမ်းပေးလိုက်ပြီး “ ခင်ဗျားအတွက်နွားနို့ဝယ်လာတာပါ”
အိမ်ရှင်အမျိုးသားသည် နွားနို့ယူပြီး ခန်းမလမ်းထဲသို့ ပြေးဝင်သွားပါသည်။ ခန်းမလမ်းထဲမှ အမျိုးသမီးတဦး ထွက်လာပြီး နွားနို့ကိုင်လျှက် မီးဖိုချောင်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားပါသည်။ အမျိုးသားသည် ငိုနေသောခလေးငယ် ကိုချီလျှက် အမျိုးသမီးနောက်က လိုက်သွားပါသည်။ အိမ်ရှင်အမျိုးသာ၏ပါးပြင်ပေါ်တွင် မျက်ရည်စီးလျှက် ရှိနေပါသည်။
“ ငါတို့တွေ အခုဘဲဆုတောင်းနေတာပါ။ ဒီလပေးစရာဘီလ် များလို့ ငါတုိ့တွေ ပိုက်ဆံ ပြတ်သွားတယ်။ ခလေးအတွက် သောက်စရာနို့လုံးဝမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် နို့ရဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဖေါ်ပြဖို့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ဆုတောင်းနေတာပါ”
Read more: နာခံတတ်ခြင်း This will give you chills